Waqtiga Akhrinta: 2 daqiiqo Markii aan hawlgal toos ah ugu dirayay wargeys, istiraatiijiyaddeennu waxay ahayd mid fudud oo waxtar badan. Waxaan ku xoojin karnaa xayeysiiyeyaasheena adeegsiga barnaamijkeena boostada tooska ah iyadoo la siinayo qiimo dhimis guud ahaan xayeysiisyadooda. Waxaan haysanay barnaamij boostada tooska ah oo tayo leh, laakiin qiimaheena aad ayuu u sarreeyay marka loo eego tartan kasta. Istaraatiijiyaddu aad ayey u guuleysatay oo waxaan si isdaba joog ah ganacsiga uga qaadnay tartankeenna… in kasta oo xayeysiiyeyaashu ay bixiyeen wax badan. Gudaha, tan
Waqtiga Akhrinta: 2 daqiiqo Hagaag, hadaan halkaan kuleeyahay, ha waalin oo iskaga tag. Dhegeyso waxaan kuu sheegayo. Waxaa jira olol ka socda guud ahaan barta blog-ka ee hadda ku jirta qorista Blog-ka ee Nicholas Carr, Akhrinta Weyn. Shel Israel waxay ku jirtaa dooda, sida tan kale oo ah qorayaal kale (tusaale). Waa inaad aqriso Mudane Carr boostadiisa oo buuxda kahor intaadan aqrin waxa aan dhahayo. Waxaan rajeynayaa inaan si cadaalad ah fariintiisa ugu gudbiyo… Waxaan u maleynayaa wuxuu yahay
Waqtiga Akhrinta: <1 daqiiqadii Akhbaar weyn oo ku socota Mareykanka: Xaakim federaal ah oo ku sugan Detroit ayaa xukumay subaxnimadii Khamiista in NSA ee "Barnaamijka Dabagalka Argagixisada" ay ku xad gudbeyso habsami u socodka iyo damaanad qaadka hadalka ee dastuurka Mareykanka, wuxuuna amar ku bixiyay in si deg deg ah oo joogto ah loo joojiyo dhageysiga taleefanka gudaha ee maamulka Bush. iyo isgaarsiinta internetka. Sheeko Dheer oo Ku Saabsan Xadhig… Ma ahi taageere ACLU (in kastoo aan xubin ka ahay EFF) laakiin tani guul weyn ayey u tahay
Waqtiga Akhrinta: <1 daqiiqadii Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku warantay in macallinka fasalka labaad John Mark Karr loo xiray dilkii JonBenet Ramsey. Haddii ay dhacdo inaad ka dhacday boggayaga oo aad xiiseyneyso… nope, xiriir lama leh.
Waqtiga Akhrinta: 5 daqiiqo Waxaan lahaa maanta fasax maanta (Waan u baahanahay!). Waxaan ka akhriyay baloog kale in dad badani ay raadiyaan "101". Markaa… sidii caadiga ahayd, waxaan tijaabinayaa aragtida si aan u arko jawaabta ay tahay. Waxaan la yaabay sida ay u fududahay in la imaado kuwan, waxyaabo badan oo adduunka ka jira, ganacsiga, iyo waddankan ayaa igu waalaya. Dabcan, laga yaabee inay aniga uun tahay. Xor ayaad u tahay
V Hore 1 ... 1,010 1,011 1,012 ... 1,027 Next →